Global Voices teny Malagasy » Vaovao Farany Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Poloney · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Septambra 2017 2:54 GMT 1	 · Mpanoratra Jordan & Maria Seidel Nandika Miranah
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Polonina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Tanora, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
(Fanamarihana: efa tamin'ny volana Aprily taona 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Efa nanontany tena ve ianao hoe andro inona eo amin'ny fiainan'ny olona iray monina any Polonina no mitovy amin'ny lahatsary maharitra 10 minitra? Tsy nahafantatra koa aho raha tsy tonga tany Polonina. Nametraka webcam tao amin'ny varavarankely ao an-tanànan'i Varsovia  ny Blog from Poland (bilaogy avy any Polonina). Azonao jerena ve ny fiara fitateram-bahoaka manjelatra, mavo sy mena? Amin'ny fampiasana ny teknolojia Google, afaka mahita sisin-dalana ao an-tanànan'i Varsovia  eo noho eo ianao.
Mitohy amin'ireo fampisehoana tsy misy fahaiza-manao, mitatitra momba ny drafitra ratsy tantana avy amin'ny tarika Teatira Mozika Lublin  hanao fampisehoana ao amin'ny tobin'ny fahafatesana tamin'ny andron'ny Ady Lehibe Faharoa ny beatroot. Indrisy,
tsy nampoizin'ireo mpikarakara tanteraka, nisy ny hetsi-panoherana. Ny maro amin'izy ireo. Avy amin'ny vondrona Jiosy
Tao amin'ny takelaka fametrahana fanehoan-kevitra, na dia izany aza, DBN manontany tena  hoe aiza ny dikanteny Poloney amin'ny ACLU:
Hmm, tsy misy hetsi-panoherana avy amin'ireo “liberaly malaza” momba ny “fanakanana ny fahalalahana miteny”.
Na dia tezitra aza izy ireo rehefa tsy navelan'ny oniversite nampiseho t-shirts miaraka amin'ny teny filamatra, toy ny hoe “nanala zaza aho” na “mimasta aho” nandritra ny fetiben'ny sarimihetsika momba ny zon'olombelona. izay niresaka ny fandripahana ny Tsetsenina, ankoatra ny zavatra hafa.
Maneho hevitra somary malina kokoa, hoy i roman :
Iza no miaraka amin'ireo fampisehoana hafahafa ireo? Inona amin'ny ampahan'ny teny hoe “manetriketrika” no tsy azon'izy ireo?
Avy amin'ny hevitra hafahafan'ny hetim-bolo miendrika borosy an'ireo lazaina fa tanora “tsy manana hoavy” ao Polonina, matahotra i P3 fa mety hitera-doza ny kolontsaina punk mivoatra ao Polonina,  na dia “any amin'ny firenena izay mirehareha amin'ny tenany momba ny toetra amam-pitondran-tena sy ny governemanta mirehareha amin'ny tenany momba ny fitondran-tena.” Tena tranga amin'ny tsy fisian'ny lehilahy maodely ve izany, sa fikomiana tranainy fanaon'ny tanora fotsiny ihany? Nitaraina i P3:
Aiza ireo lehilahy maodely mahery ao amin'ity firenena ity izay tena ilain'ireo ankizy mafy? Olona manao ahoana no mampianatra any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa? Aiza ny ray aman-dreniny?
Tena mampihoron-koditra … ary mba hanampiana hanadiovana ireo tanora jiolahimboto ( na dia mijery avy amin'ny fitangenana lafo vidy) aza izy ireo, ireo tanora ireo ihany no “mpiasam-panjakana” mampalaza ny tenany, araka ny filazan'ny The Warsaw Crow. Ao amin'ny dikanteny Poloney amin'ny “Pimp my Ride”, hita manao sorona ny tenany sy ny rantsa-tanana aman-tongony ireo tanora an-tanàndehibe (minoa ahy, eny amin'ny araben'i Varsovia, tsy hoe fanitarana) mivarotra sy mametraka fiara nofantenana miaraka amin'ny “famafàna fitaratra (essuie-glace)”:
Mitady lehilahy afaka resy lahatra izy ireo fa ny hambom-pony sy ny hafaliany 3 taonina dia iharan'ny olana ara-pifamoivoizana. Dieny izao ihany, mampiseho fisalasalana amin'ny fotoana ny lasibatra, nesorina taminy ny fitaovany famafana. Voakaikitra ny molotra ary nolazaina ny hadisoana.
Amin'ny bilaogy amin'ny teny Poloney: misy olona manahy nony farany noho ny fitomboan'ny isan'ireo tanora, miala ny firenena ireo Poloney matihanina mba hitady ny harenany any ivelany. Nanao fanentanana ara-dokambarotra tao Londra ny tanànan'i Wrocław, izay toa tsy ahitana ekipa matihanina amin'ny fananganana trano sy mpanamboatra fantson-drano, mba handresy lahatra ireo mpifindra monina Poloney mba hiverina sy honina ao Wrocław. Oops! naneho hevitra hoe  (POL):
Adinon'izy ireo ny nanasonia ny afisy. “Am-panajana – Biraon'ny Hetra Poloney.”
Tsy tokony hiahiahy isika, na izany aza: tsy ho tany foana tanteraka i Polonina. Ho solon'ireo tanora matihanina an'arivony maro nandao ny firenena, hahazo mpizahatany tandrefana maro dia maro  isika – mitady ny sasantsasany amin'ireo zavatra Sovietika taloha tsy mahazatra – tsy lazaina intsony ny tolotra ara-pahasalamana mora kokoa:
Iray amin'ireo sehatra fizahantany goavana i Polonina amin'izao fotoana izao: laharana faha-11 ao amin'ny lisitra isika, alohan'i Repoblika Tseky & Kroasia hatramin'ny goavan'ny fizahantany tahaka an'i Torkia.
Izay ny vaovao farany ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Poloney! Amin'ny manaraka indray – Do widzenia!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/14/107146/
 webcam tao amin'ny varavarankely ao an-tanànan'i Varsovia : http://video.google.com/videoplay?docid=-837155774365161804
 sisin-dalana ao an-tanànan'i Varsovia: http://lis.dyndns.info:45454/webcam/
 drafitra ratsy tantana avy amin'ny tarika Teatira Mozika Lublin: http://beatroot.blogspot.com/2006/04/no-room-at-majdanek-death-camp.html
 DBN manontany tena: http://beatroot.blogspot.com/2006/04/no-room-at-majdanek-death-camp.html#c114581579526428854
 hoy i roman : http://beatroot.blogspot.com/2006/04/no-room-at-majdanek-death-camp.html#c114584215565230744
 kolontsaina punk mivoatra ao Polonina,: http://polishstyle.blogspot.com/2006/04/what-will-these-kids-do.html
 hita manao sorona ny tenany sy ny rantsa-tanana aman-tongony : http://warsawcrow.blogspot.com/2006/04/warsaw-racketeers-wipe-up.html
 naneho hevitra hoe: http://www.ooops.pl/blog/?p=1712#more-1712
 mpizahatany tandrefana maro dia maro: http://polandia.blox.pl/2006/04/Drugie-odkrycie-Polski.html